Xildhibaano Taageersan Jawaari oo kulmay Eedeyna u jeediyay C/Wali Muudey | Baydhabo Online
Xildhibaano Taageersan Jawaari oo kulmay Eedeyna u jeediyay C/Wali Muudey
Xildhibaano taageersan Gudoomiyaha Baarlamaanka ayaa maanta kulan ku yeeshay xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho, waxa ayna Xildhibaanadan eedeyn usoo jeediyeen Gudoomiye kuxigeenka 1aad ee Baarlamaanka.
Waxa ay ku eedeeyeen Xildhibaanadan Gudoomiye kuxigeenka Baarlamaanka Cabdiweli Muudey in uusan dhax dhaxaad ka aheyn mooshinka Jawaari laga keenay, waxa ayna sheegeen in uu la saftay Xildhibaanada mooshinka wada.
Xildhibaanadan ayaa sheegay in Muudey uusan kaligiis wax go’aamin karin kalsoonina aysan ku qabin , , waxa ayna ku baaqeen in la helo Gudoon dhax dhaxaad ah ay ku kalsoonaan karaan.
Xildhibaanadan taageersan Gudoomiye Jawaari ayaa soo dhaweeyay baaq shalay kasoo baxay Xildhibaanada Aqalka sare oo ku aadanaa mooshinka Baarlamaanka horyaala iyo xiisada ka dhalatay.
Baarlaaanka Soomaaliya ayaa hada u qeybsamay labo garab kuwa taageersan Gudoomiyaha Baarlamaanka iyo kuwa kasoo horjeeda oo mooshin kawada , waxaa sidoo kale Gudoonka Baarlamaanka iyana soo kala dhax galay kgilaaf xoogan.